ဘဝမှတ်တိုင်: Phone Cover ပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ Screen Lock ကျသွားမယ့် - Smart Cover Pro v1.4.2 apk Update (April-15)
Phone Cover ပိတ်လိုက်ရုံနဲ့ Screen Lock ကျသွားမယ့် - Smart Cover Pro v1.4.2 apk Update (April-15)
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးတဲ့ Application လေးကတော့ အတော်လေးလန်းပါတယ်။ Phone Screen ကို Cover အုပ်လိုက်တာနဲ့ Screen Lock ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Cover လေးပြန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Screen On လာမှာပါ။ လန်းတယ်နော်။ Cover နဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူး။ လက်နဲ့လည်း ဖုန်းရဲ့ Sensor နေရာလေးကို ကာလိုက်တာနဲ့ Screen On/Off လုပ်ပေးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းဝင်လာရင်လည်း Shake လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းကိုင်ပြီးသားဖြစ် မှာပါ။ သူ့မှာလည်း Feature တွေအစုံအလင်ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Feature တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုချင် တယ်ဆိုရင်တော့ Device Administrator မှာ သက်ဆိုင်ရာ Option ကို On ပေးရမှာပါနော်။ ဒီထက်ပိုပြီးသိချင် တယ်ဆိုရင်တော့ အောက် မှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
8. Widget add (1 x 2, 1 x 1)
13. Rotation Control
★ ★ ★ History ★ ★ ★
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/17/2014 04:52:00 pm